हाई ब्लड प्रेसर कम गर्न कुन फलफूल खाने ? जानी राखौँ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ६ माघ २०७५, आईतवार २१:३० लेखक नेपाली जनता
जहाजभित्र भिखारी !
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अचम्मको भिडियो भाइरल भएको छ । उक्त भिडियोमा एउटा जहाजमा मानिसहरू हाँसिरहेका पनि छन् र…
मोबाइल पारखीहरु सावधान !
मोबाइल मानिसका लागि अत्यावश्यक बनिसकेको छ । यो जीवनकै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ । तर, यसको प्रयोगमा भने…
चितवन । पर्यटकीय नगरी सौराहा नजिकै डाँडामा रहेका चेपाङ जातिले आगोको भरमा रात बिताउन बाध्य भएका छन् ।
नेपालमा भेटिए कोरोनाको छैटौं संक्रमित 43 views
यस कारण विवादमा आए अस्गर अली, सल्लाहकार पद धरापमा ? 16 views